Doorashada Madaxweynaha Hir-shabelle oo Bilaabatay – SBC
Doorashada Madaxweynaha Hir-shabelle oo Bilaabatay
Posted by SBC Editor on Siteenbar 16, 2017 Comments
Doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa Goordhow ka bilaabatay Hoolka weyn ee Farjano ee magaalada Jowhar, hoolka ayaa waxaa ku sugan Xildhibaaano, Musharaxiinta, Guddoonka Baarlamaanka Hirshabeelle, Madaxweyne kuxigeenka, Wasiiro iyo Xildhibaano ka socda Federaalka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa ku dhawaaqay in madasha ay furan tahay, isla markaana la diiwaan geliyo tirada Xildhibaanada joogta, si ay u bilaabatay codeynta wareega 1aad ee doorashada.
Illaa 8 Musharax ayaa ku tartamaya doorashada, kuwaasoo maalmihii la soo dhaafay olole aad u xooggan ka waday magaalada Jowhar.
Saddex Iskuul oo ku dhow xarunta ay doorashada ka dhaceyso ayaa la fasaxay, iyadoo ardaydii saaka aadi laheyd lagu wargeliyay in aanay maanta imaan, sababo ku aadan doorashada dhaceysa iyo ammaanka oo la adkeeyay.
Musharaxiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xalay oo dhan ku jiray olole xooggan, lagama seexan guryaha ay degan yihiin, waxaana si gaar gaar ay ku qaabilayeen Xildhibaanada Baarlamaanka, si ay kalsooni uga helaan, una codeeyaan.
8 Musharax ee u tartameysa doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle:-
8- C/kariin Cali Nuur
La soco faah faahinta Insha Allah.